कुलमानलाई निरन्तरता दिनेगरि प्रस्ताव तयार, प्रधानम’न्त्री ओली सकारात्म’क ! – Eshankharapur
ढाड दुख्ने समस्याको अचुक औषधी हो कपुर, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् मिल्नेछ फाइदा
कपिलबस्तुकी ६ बर्षकी जियाको दुनिया चकित पार्ने क्षमता, ५ मिनटमै दिन्छिन् ५०० प्रश्नको उत्तर (भिडियो हेर्नुस्) (भिडियो हेर्नुस्)
फेरी अर्को। खुसीको खबर। (पुरा हेरी सक्दो सेयर गरौ
काठमाडौं उपत्यका मा डरलाग्दो अबस्था
कोरोनाको जोखिमकाबीच काठमाडौमा भिड बढ्यो, विज्ञले दिए यस्तो सुझाव
रुसले २ करोड ५० लाख डोज कोरोना–भ्याक्सिन नेपाल पठाउने, भ्याक्सिन क्लिनिकमै पाइने !
त्रिविद्धारा नतिजा प्रकाशन [ नतिजा हेर्ने तरिका सहित ]
अब १ रुपैयाँमा होण्डा बाइक
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/कुलमानलाई निरन्तरता दिनेगरि प्रस्ताव तयार, प्रधानम’न्त्री ओली सकारात्म’क !
कुलमानलाई निरन्तरता दिनेगरि प्रस्ताव तयार, प्रधानम’न्त्री ओली सकारात्म’क !
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिनेगरि विभागीय मन्त्री उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव तयार पारेका छन् । यही भदौ २९ गतेबाट घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ । तर, उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि जनस्तरसम्म व्यापक माहोल देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उनलाई निरन्तरता दिन सकारात्मक देखिएका छन् ।
यसअघि सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले घिसिङलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालले घिसिङलाई नियुक्ती दिएको भए अर्कै कुरा नत्र सरकारले नियुक्त गरेको छैन भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
स्रोतकाअनुसार उर्जामन्त्री पुनले यसअघि घिसिङको बारेमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि परामर्श गरेका थिए । दाहाल त सुरुदेखि नै घिसिङलाई नै उक्त पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । पुनले पनि दाहालकै निर्देशनबमोजिम घिसिङलाई निरन्तरता दिनेगरि प्रस्ताव तयार पारेका छन् । आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिरहेको छ । सम्भवतः आजकै बैठकमा घिसिङलाई निरन्तरता दिनेबारे प्रस्ताव लगिएको स्रोतको दाबी छ ।
कुलमानलाई सरकारले निरन्तरता दिन नचाहेको भनेर सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्चा तथा परिचर्चा भएपछि स्वयम घिसिङले सरकारको बचाउ गरेका थिए । घिसिङले प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनको स्पष्ट मार्गनिर्देशनका आधारमा विद्युतभार कटौतीको अन्त्यलगायत प्रशासनिक सुधारको काम गरेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको र त्यसमा सरकारको नीति, निर्देशन तथा कार्यादेशले काम गरेको बताएका थिए।
घिसिङलाई निरन्तरता दिनको लागि विभागीय उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनपनि सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनले अहिलेसम्म क्याविनेटमा त्यसबारेमा प्रस्ताव नलगेको स्वयम सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्प्ष्ट पारिसकेका छन् ।
घिसिङले हिजो (बिहीबार) एक विज्ञप्ती जारी गरेर भनेका थिए,“विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारी नै हुन् ।”
स्रोतकाअनुसार घिसिङले आफू नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनेगरि लविङपनि सुरु गरेका छन् । यसका लागि उनले आफ्ना नजिकका मान्छेहरुलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पठाएका छन् । उनले एक कार्यकाल आफूले काम गर्न चाहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । श्रोत रिपोटर्सक्लब नेपाल
रबि लामिछाने संगको वि’वाद बारे बोलिन धमला पत्नी एलिजा ! माफी माग्दै भनिन् रवि सर देश कै गहना हो (भिडियो)
एक अध्ययनले भन्यो नेपालमा फेरि २०७२ को भन्दा शक्तिशाली भूकम्प आउन सक्ने
बैशाख २६ बाट खुल्ने भयो लकडाउन , कहाँ कहाँ चल्छ गाडी ? LIVE मा मन्त्री योगेशले गरे यस्तो खुलासा ( भिडियो सहित )
“तिमीले भन्दा बढी दुख र संघर्ष मैले गरेकी छु तर पनि जीवनबाट हारिन, तिमीले किन हार्‍यौं” नेहा कक्कड